समीक्षा: क्लिफ मोर डे-ट्रिप | सडकको लागि एक युगल
मार्च 24, 2017 /4टिप्पणिहरु
आयरल्याण्ड शान्तिपूर्ण क्षेत्रहरूको सुन्दर र निस्क्रिय हरी परिदृश्य हो र तपाईले हेर्नु भएको सबै शहरहरु र क्लासिक संरचनाहरु हलचल। डबलिनमा हामी हाम्रो अन्तिम यात्रामा देशभरको यात्रा लिनुभयो काउन्टी क्लेयरमा मोरको प्रसिद्ध चट्टानहरू हेर्न।
एक अपेक्षाकृत सानो समूह टूरको रूपमा, यो मोर क्लिफको लागि सुखद उत्साह थियो डब्लिन एक ठूलो वातानुकूलित यात्री भ्यान मा। एक यात्रा एक Meandering एक छ, चराहरु र खेती को मैदानहरु, परिवार को खेतीहरु र हरी प्रकार को भरी म ईमानदारी देखि भन्न सक्छ कि म अमेरिका उज्ज्वल र शांत मा परिदृश्य संग कभी नहीं देखा छ, बीच को बीच एक चार घन्टा को यात्रा पछि, हामी चट्टानमा आइपुग्यौं! त्यहाँ सवारी, व्यवस्थित र शान्त ठाउँ (जसलाई हामीलाई छिटो छोटो पार्न अनुमति दिइएको छ), हामीलाई हामीलाई निर्धारित समयमा भेट्न निर्देशन दिइयो, पछि हामी अन्वेषण गर्न मुक्त भए।
द्रुत टिप: तपाईले क्लिफलाई आफ्नो मार्ग बनाउनुहुने ब्याकप्याक वा थर, पानी, पेय र नाकहरूसँग लिनुहोस्! हामीले केही बोतलहरू चिसो चिया, पनीर काट्ने र पटाखेहरू सँगसँगै बाटो ल्यायौं।
टूर भ्यानबाट निस्किँदा, हामी बिस्तारै हावाको हावा लगाइरहेको थियौ, जुन तातो तातो थियो! चट्टानहरू आफूलाई हाम्रो सामने सूर्यको प्रकाशमा उभिए, र तुरुन्तै आश्चर्यजनक हुन्छ। हेर्न को लागी आसान छ किन मोर क्लिफ धेरै फिलिमहरु को लागि फिलिमिंग स्थान को रूप मा चुनेको थियो, जस्तै किरी पोटर र हाफ-ब्लड राजकुमार। लामो यात्रा पछि हामी भोकाएका थियौं र मुख्य आगन्तुकको क्षेत्रमा रेस्टुरेन्टमा हाम्रो बाटो भेट्यौं।
दृश्यहरू लिनुअघि नजिक, हामी भूकम्प (र धैर्य रूपमा Hobbit-like) डुममा पृथ्वीमा बनाएको प्रवेश गर्नुभयो जुन आगन्तुक केन्द्र र छिटो कुकुर र तातो खाना संग एक कैफेटेरिया घर छ। लामो सवारी पछि हामी गिनीस स्टेक डिस्किङ्गमा मसिड आलु, एकदम राम्रो र ठूलो भागको साथ भाग लिनुभयो! बीचमा, हामी प्रदर्शनी, केन्द्र को निचला भाग मा एक मजेदार र व्याख्यात्मक क्षेत्र मार्फत चलाउछौं जसले दर्शकहरूलाई प्रदर्शनी र प्रदर्शन संग क्लिफ प्रकृति देखाउँछ। घमण्ड आफैं क्लिफ: महासागर, रक, प्रकृति र मानव को चार तत्व को हाइलाइट गर्न को लागी सेट अप गरिएको छ।
साइनपोस्टमा एक क्षणमा लिँदै जसले मोफको क्लियर प्रवेश गर्दछ।
702 फिट (सर्वोच्च बिन्दुमा) माथि माथि माथि चढ्दै चट्टानहरू अटलांटिकको तर्फबाट पाँच माइलको लागि चल्छन्। हामी पहाडी दायरामा पुग्यौं जहाँ हामी एक छेउमा बाटो बाटो भेट्यौं, स्लेटको कमर-उच्च स्लैबहरूसँग सुरक्षित राख्यौं जुन सुरक्षित यात्राको चट्टानको किनारमा बसोबास गरिरहेका एक ऐतिहासिक र ऐतिहासिक बाड़ रेखा बनाइएको छ किनकी तपाईं आश्चर्यजनक दृश्यबाट हेर्नु हुन्छ। अधिक साहसिक लागि, स्लेट माथि एक कदम लिनुहोस् र एक चट्टानहरूको किनारामा कुनै सुरक्षा सुविधा सहितको किनारा सामना गर्ने बाटोमा हिंड्नुहोस्!
यद्यपि त्यसो गर्न निरुत्साहित भए तापनि (र निश्चित भएन यदि यो प्राविधिक रूपमा "अनुमति" छ!), हामीले असुरक्षित सीमामा चुनौती र म्यानमार लिने निर्णय गरे। हाम्रो वरिपरी घाइते हवाइहरू यो एकदम खतरनाक थियो, तर पनि उत्साहजनक र एक पटक जीवनभर अनुभवमा!
महाकाव्य विस्फोटको क्षणलाई पराजित गर्दछ जुन समयको समयमा ठूलो मात्रामा, चट्टानको समुद्री खण्ड खण्डहरू मात्र बनाउँदछ जुन केवल वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। क्लिफहरूको मानव उद्देश्य केवल व्यक्तिमा अर्थपूर्ण बनाइन्छ - हामीले कहिलेकाहीँ सानो छोटो महसुस गर्यौ जुन केहि अनन्तत्वको साथ हरी घासको छेउमा पुग्ने प्रेरित हुन्थ्यो। हामी किन सीमामा पसेका थियौ, घाँटीको छेउमा सानो पीला फूलहरू उचाइयो। किनारमा खतराको गहिरो डुवानी र प्रकृति सृष्टि गर्ने प्रकृतिको बीचमा सुन्दर जक्सटोपस्थिति।
चट्टानहरूको दृश्य ईमानदारीसाथ एक छ जसले हामीलाई चुस्त र मानसिक बनाउनेछ जब हामी बिस्तारै सँगसँगै जान्छौँ। "ब्रेकटेक्किङ" शब्द भनेको आयरल्याण्डको किनारमा यो अनुभवको लागि प्रायः सम्भव छ। तपाईं तट पार गर्नुहुन्छ, तपाईं एक स्प्रे द्वारा वा शुभचिन्तित हुनेछ र पानी को माथि माथि, बेस्संदेही उभिन्छ र फेरि समुद्र देखि वर्षा गरेर, एक प्रतीकात्मक असक्षमता! जब तपाईं क्लिफ माथि जानुहुन्छ र एक पटक जब तपाईं महल लाई आफ्नो मार्ग बनाउनुहुन्छ तब गल्ति माथि / माथिको झरना तपाईंलाई दुई पटक हिउँदछ।
पैदल यात्राको साथ, समुद्र स्प्रे वर्षा।
द्रुत टिप: वायुहरूका अतिरिक्त, मोफको चट्टानहरू माथिल्लो छिड़काउने, समुद्रबाट गन्दा पानीको स्वादहरू छन्, त्यसो गर्दा स्कार्फ वा टोपी ल्याउनुहोस्, र नजिकको अनुभवको आनन्द लिनुहोस्!
क्लिफहरूको अत्यावश्यक खुल्ला अनुहारमा हिड्नु पछि, हामी ओब्रिनको महल वरिपरि घुमाउथ्यौ, सानो सानो संरचना हो कि दुई यूरोको लागि तपाईं घुमाउरो सर्पिल सीढ़ी माथि माथि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ देखि, दृश्य हड़ताल छ! 1835 मा बनाएर ल्याण्डलिभियस ओब्रिन्सले ल्याण्डलिभर ओरेब्रिअन द्वारा आगामी पर्यटकहरूलाई हेर्नका लागि यात्रा गर्ने क्रममा मौसम मौसम सुन्दर थियो र क्लियरको दक्षिणी टिप र यहाँ सम्म कि केरीको पर्वत सम्म पुग्न धेरै स्पष्ट थियो। पश्चिममा हामीले तीनाराना आइल्याण्ड आइल्यान्ड्सलाई हेर्यौं, जहाँ हामीले मित्रता टवर दरबारबाट सूचित गरेका थियौं, 1,200 वा त्यसका बासिन्दाहरू प्रायः विशेषगरी आयरिश गेलिक (अंग्रेजीमा थप) बोल्छन्! यी द्वीपहरू प्रसिद्ध अरन स्वेटरको घर हुन्, जसले बीसौं शताब्दीको मध्यमा विश्वभर लोकप्रियता पायो।
अझ बढी र चल्ने र व्यक्तिगतको साथ व्यक्तिगत प्राप्त गर्न एक तरिका, एक निर्देशित भ्रमण बुक गर्नुहोस्! यी सानो समूह भ्रमणहरू प्रशिक्षित स्थानीय दायराहरू द्वारा आयोजित भूगोल र भूगोलमा रुचि राख्ने सबैका लागि आदर्श हुन्। लागत प्रति समूहको बारेमा 45 यूरोको बारेमा छ, र तिनीहरू कम्तीमा एक हप्ता अघि बुक गर्न सल्लाह दिन्छ!
हाम्रो साथीहरूसँग सुन्दर सुन्दर ओबेरियन क्यासल!
चट्टानहरू र ओबेरियन महलको भ्रमणको क्रममा हाम्रो हिँडाइ पछि, हामी एक पटक फेरि आगन्तुक केन्द्र भ्रमण गर्यौं, यो समय स्वेच्छाहरू प्राप्त गर्न! केन्द्र मा कर्मचारी समायोजन र मददगार छ, र यो कुनै आश्चर्य नहीं छ कि तपाईं यहाँ हरेक जगह पारंपरिक आयरिश मित्रता र आकर्षण छ। एक कुञ्जी चिनो, चुम्बक, वा केही चकलेट उठाउनुहोस् (जस्तै हामीले गर्नुभयो!) र पुरानो दृष्यको आकाशको छेउमा सुरू गर्न सुरू हेर्नुहोस्।
मोर क्लिफको पछाडिको सडक बस हानिकारक र विचारधारा - हरित क्षेत्रहरु र शहरहरु को एक विशाल विस्तार को रूप मा एक शांतिपूर्ण गति संग रोल को रूप मा थियो। यद्यपि हामीले चिसो सडकमा मन्डारेर हामी सुत्न सक्छौं, अनुभवले नै मेरो मेमोरी राख्यो - र दृष्टि - यात्राको लागि जान्छ। क्लिफबाट डबलिनमा फर्केर आउनुभयो, हामीले पुनः ताजा, प्रेरित, र आयरल्यान्डको साथमा प्रेम महसुस गर्यौं!
श्रेणी: युरोप, आयरल्याण्ड, समीक्षा टैग: चिसोको चट्टान, दिन-यात्रा, डब्लुबिन, आयरल्याण्ड
← बार्सिलोनाबाट दिन यात्रा: कोस्टा ब्रावा र साल्वाडोर डाली
यात्राको लाभ: एक स्व विकास उपकरणको रूपमा यात्रा गर्नुहोस् →
4 टिप्पणिहरु "समीक्षा: क्लिफ मोर डे-ट्रिप"
मेरो पति र म यहाँ केहि वर्ष पछि गए। तपाईंको तस्विरहरु साँच्चै मेरो लागि केहि सम्झनाहरू चल्छन्। मैले मेरो क्यामेरालाई यस यात्रामा बिर्सन सकें त्यसैले मैले हवाईअड्डामा एक डिस्पोजेबल पाउनु पर्छ। मैले अझै तिनीहरूलाई विकसित गरेको छैन र अहिले म यो गर्न मिशन गर्दैछु। मलाई यो खुम्च्याउनु पर्छ र यो सप्ताहांतको अन्तमा लिनु पर्छ। यस स्थानको बारेमा कसैको अनुभवको माध्यमबाट पढ्न मन पराउछ, विशेष गरी त्यहाँ भएको छ। मलाई हरी खेतहरू पनि माया गर्थे।
यो एक सुन्दर स्थान हो - हामी सबै आयरल्याण्ड loved प्यार गर्दछौं
तस्वीरहरूमा चमक रोक्न सकिँदैन .. कुन कुन सभ्यताको वातावरण हो, म आफैले चीजहरू हेर्न आयरल्यान्डलाई भेट्न सक्दिन। के तपाईं रसद लागत लोड गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद!
यो तपाइँले भ्रमण गर्नुहुने भ्रमणमा फरक फरक हुन्छ, तर प्रति व्यक्ति डबलिन भन्दा बाहिरको दिन यात्राको लागि $ 60-70 USD छ। बिल्कुल राम्रो यो लायक!